मनोरन्जन Archives - Page 123 of 127 - Recent Nepal News
छक्का–पञ्जाको चुम्बन, हुटिङ र रुवाबासी (फोटोफिचर)
सुजन पन्त काठमाडौं, भदौ २७– हास्यकलाकारको काम हँसाउने मात्र नभई रुवाउने पनि रहेछ भनेर अहिले हलमा चलिरहेको छक्का–पन्जा फिल्मले प्रष्ट्याइदिएको छ । हास्यकलाकारहरुको काम त वास्तवमा हँसाउने मात्र नै हो । तर उक्त चलचित्रमा उनीहरुले पेट मिचिमिचि हँसाएका पनि छन् । तर, हँसाउने हास्यकलाकारहरुलाई दर्शकले धेरै माया गरेपछि रुन थाल्दा रहेछन् । यस्तै दृश्य देखियो रिलिज भएको दिन (शुक्रबार)देखि आज बिहानसम...
नेपथ्यको नयाँ गीत ‘हो रामा रामा’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपथ्यले आगामी एल्बमको अर्को नयाँ गीत ‘हो रामा रामा’ सार्वजनिक गरेको छ । ब्याण्डले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत् भने यसलाई पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । ब्याण्डले आफ्नो आधिकारिक यु ट्युब च्यानलमार्फत् भने यसलाई पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको हो । सन् २०१४ मा दक्षिणकोरियाको राजधानी सउलमा यो गीत पहिलोपटक गाइएको थियो । ‘हो रामा रामा’लाई नेपथ्यले नै झण्डै दस वर्षअघि लेखन तथा संगीत दिने काम...
‘छक्का पञ्जा’को आक्रामक ओपनिङ,कुन दिन कति कलेक्सन ?
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा हाँस्य कलाकार दिपाश्री निरौलाको डेब्यू निर्देशन रहेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ले आक्रमण व्यापार गरेको छ । शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘६क्का पञ्जा’ले शनिबार नेपाली चलचित्रको इतिहासमा व्यवसायिक किर्तिमान कायम गरेको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिनमा नै ५५ लाख कमाई गरेको चलचित्रले दोश्रो दिन देशका अधिकांश हलहरुमा हाउसफूलको व्यापार गरेको छ भने कतिपय हलहरुमा त नयाँ रेकर्ड समेत बना...
मिस टुरिजम–२०१६ को उपाधी ओरुसालाई
काठमाडौं । प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आयोजना गरेको “मिस टुरिजम–२०१६” को उपाधी ओरुसा थापा मगरले जितेकी छन । त्यसैगरी मिस टुरिजम–२०१६ फस्ट रनर अपमा जेनी अमात्य र मिस टुरिजम–२०१६ सेकेण्ड रनर अपमा शर्मिला तामाङ विजयी भईन । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले उत्कृष्ठ पाँच प्रतियोगीहरुलाई सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफका आधारमा उत्कृष्ठ तीनको छनोट गरिएको थियो । मिस टुरिजम–२०१६ मा मिस डिसिप्लिन...
जितु नेपाल भन्छन; “कपिल शर्माको अगाडी मलाई हेपियो”
चर्चित हास्यकलाकार जितु नेपालले भारतीय कलाकार कपिल शर्माका सामू आफुलाई गरिएको उपेक्षा जीबनमा कहिल्यै भुल्न नसक्ने बताएका छन् । एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनेले भारतीय कलाकार र आफुहरुलाई गरिने विभेदका बारेमा भावपूर्ण अनुभव साटेका थिए । उनले भारतीय कलाकार कपिल शर्मा नेपाल आउँदा आफुलाई बोलाएर पनि आयोजकले नराम्रोसँग उपेक्षा गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । दुई बर्ष अघि(०७१, मंसिर) को तीतो अनुभव सा...
बलिउड अभिनेता अक्षय ४९ औं बर्षमा,कसरी बने बलिउड स्टार ?
शुक्रबार, भाद्र २४, २०७३
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार ४९ बर्षमा प्रवेश गरेको छन् । सन् १९६७ सेप्टेम्बर ९ तारिख को दिन भारतको अमृतसर पञ्जबमा जन्मिएका अक्षयले आज आफ्नो ४९ औ जन्मदिन मनाउदै छन् । उनको वास्तविक नाम राजीवहरी ओम भाटिया हो । अक्षयलाइ बलिउडमा अक्की , खिलाडी कुमार , किंग कुमार संगै द किंग अफ बलिउड को संज्ञा दिने गरिएको छ । अक्षय कुमारको फिल्म जगतमा कोहि न भएपनि आफ्नो मार्शल आर्ट को सहायताले फिल्म जगत मा प...
‘छक्का पञ्जा’ देशैभर प्रर्दशनमा,’बारबार देखो’‘फिक्रि’ ‘बेन अर’ सँग भिड्दै
काठमाडौं । दीपक राज गिरिको चलचित्र 'वडा नं. ६' को सुपरहिट गाना 'सुर्के थैली' को रेकर्ड तोड्ने आशाम रहेको चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ आजदेखि देशैभर प्रर्दशनमा आएको छ । छ एकान छ' तथा 'वडा नम्बर छ' निर्माण गरिसकेकाको दीपकराज गिरी तथा दीपाश्री निरौलाको समुहले निर्माण गरेको यो तेस्रो चलचित्र हो । चलचित्रमा दीपक राज गिरी, प्रियंका कार्की, जितु नेपाल, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, बुद्धि तामाङ्ग ‘हैट’, बर्षा शि...
विश्व किर्तिमान बनाउदै नेपाली वान सट फिल्म ‘जालो’
वान सट फिल्म ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ कात्तिक एक गतेबाट छायांकनका लागि वर्कसपमा जाने भएको छ । एकै सटमा खिचेर विश्व रेकर्ड कायम गर्न निर्माणको घोषणा गरिएको ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ कात्तिक एक गतेबाट वर्कसपमा जाने अन्तिम तयारी भइरहेको चलचित्रका निर्देशक तथा गायक अराज केशवले बताए । “कात्तिक एक गतेबाट रिहर्सलनमा जान्छौं । करिब एक महिना रिहर्सल गरेपछि सुटिङको समय तोक्छौं,” निर्देशकले भने, “अहिले गीत...
एलजी अवार्डमा दयाहाङ र नम्रता उत्कृष्ट
पहिलो एलजी फिल्म अवार्ड २०७३ आज सम्पन्न भयो। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका २० विधालाई सम्मान गरिएको अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म अवार्ड पशुपति प्रसादले हात पारेको छ। दीपेन्द्र खनाल निर्देशित फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने र वर्षा सिवाकोटीको मुख्य भूमिका छ। नायिका करिश्मा मानन्धरलाई पनि विशेष सम्मान प्रदान गरियो। उनले ३ दशक भन्दा बढी समयदेखि नेपाली चलचित्रमा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै पुरस्...
‘जी क्यू’ का लागि प्रियंकाको हट फोटो सुट
भाद्र २२, २०७३- बलिउड हिरोइन प्रियंका चोपडाले अन्तर्राष्ट्रिय म्यागाजिन ‘जी क्यू’ का लागि निकै हट फोटो सुट गराएकी छन् । यो फोटोमा शरीरको माथिल्लो भाग नाङ्गिए पनि उनले स्तनलाई सलले छेकेकी छन् । प्रियंकाको यो टपलेस तस्बिर निकै बोल्ड र लिजलिङ देखिन्छ । ‘जी क्यू’ म्यागाजिनका लागि प्रियन्काको खिचाएका बोल्ड तस्बिरहरु मध्ये तीन वटा मात्र सार्वजनिक भएका छन् । अर्को एक तस्बिरमा प्रियंकाले सर्टको टाँक खो...